सोनाक्षी सिन्हा पक्राउ , भाइरल भिडियोको यथार्थ के हो? – Idea Khabar
आइडिया खबर२०७६ श्रावण २१, मंगलवार २०:२७
बलिउड अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हाको एक भिडियो इन्टरनेटमा धेरै भइरल भइरहेको छ। भिडियोमा, अभिनेत्री चाँदीको रंगमा चम्किलो पोशाकमा देख्न सकिन्छ। उनी कतै गइरहेको देखिन्छ ।
उस्तै लुगाफाटामा, पछाडि देखेको केटीको हातमा कोही पछाडिबाट हथकडी लगाइएको छ। यद्यपि यस फुटेजमा केटीको अनुहार नदेखिए पनि सोनाक्षी सिन्हाको आवाज एकदमै स्पस्ट सुन्न सकिन्छ। सोनाक्षी भनिरहेकी छिन, “तपाईले मलाई यसरी पक्रन सक्नुहुन्न। म को हुँ भनेर तपाइहरुलाई थाहा छ? मैले केहि गरेको छैन। तिमीले मलाई कसरी पक्रन सक्छौ?”
जब यो भिडियो सोशल मिडियामा भाइरल हुन थाल्यो केहि प्रसिद्ध फोटोग्राफरले एउटा प्रमाणित खाताको साथ क्याप्शनसँग सेयर गरे “सोनाक्षी सिन्हा ठूलो समस्यामा छिन् जस्तो देखिन्छ।” सबै जना जान्न चाहन्छन् कि यस भिडियोको वास्तविकता के हो।
यस पछि, प्रशंसकहरूले एक पछि अर्को भिडियो साझेदारी गर्न थाले। एक प्रयोगकर्ताले लेख्यो, “के तपाईले यो भिडियो देख्नुभयो? अचम्मित छु ,जेल पठाइएको छ भनेर म पूरै पक्का छैन।”
अर्को प्रयोगकर्ताले लेखे, “आश्चर्यचकित छ कि पुलिसले सोनाक्षीलाई पक्रेको छ।” एक व्यक्तिले लेखे, “म जान्न चाहन्छु कि ऊ वास्तवमा जेलमा छिन्कि कि छैनन्?” त्यस्ता धेरै टिप्पणीहरू सोशल मिडियामा आउँदैछन्।